အမေးများသောမေးခွန်းများ (FAQs) | Poundslots လောင်းကစားရုံ
သင်၏ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုပျော်စရာကောင်းစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာရင်းပြုစုထားသည်။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်လောင်းကစားရုံဂိမ်းများမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများဖြင့်အမြဲတမ်း update လုပ်သည်။ သို့သော်သင်ရှာဖွေနေသည့်အဖြေကိုရှာမတွေ့ပါက ကျေးဇူးပြု၍ မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
မှတ်ပုံတင်ခြင်း | အတည်ပြုခြင်း | အကောင့်များ | အပ်ငွေများ | ထုတ်ယူခြင်း | ကန့်သတ်ချက်များ | နည်းပညာဆိုင်ရာ | အထွေထွေမေးခွန်းများ
အွန်လိုင်း slot များ | အွန်လိုင်း Blackjack | အွန်လိုင်းကစားတဲ့ကစားနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားရုံသို့ဝင်ရန်သင်သည် PoundSlots.com တွင်ကစားရန်မှတ်ပုံတင်ရမည်။
လောင်းကစားသည်သင်ကစားနေသည့်ဂိမ်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ ဂိမ်းတစ်ခုအတွက်လောင်းကြေးများအကြောင်းကိုရှာဖွေရန်မည်သည့်ဂိမ်းမှမဆို“ အကူအညီ” မျက်နှာပြင်ကို ဝင်ရောက်၍ လောင်းကြေး၊ ငွေပေးချေမှု၊ winlines နှင့်ဂိမ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
ပါ ၀ င်သည့်နေ့၌သင်သည်သင်နေထိုင်သည့်နယ်မြေအတွင်းလျှောက်ထားသည့်ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းသင့်အနေဖြင့်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်သက်တမ်းထက်ကျော်ရမည်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုသင်သည်အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်ရမည်။ ကစားသမားများအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့်တရားဝင်ငွေပေးချေမှုစနစ်ရှိရမည်။
ယူကေနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းဥပဒေအရအသုံးပြုသူများအားလုံးသည်လောင်းကစားအကောင့်မှရန်ပုံငွေများမထုတ်ယူမီအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ငွေခဝါချခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးသော်လည်းကစားသမားအား၎င်းတို့၏အကောင့်များကိုတရားမ ၀ င် ၀ င်ရောက်ခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်ကိုအတည်ပြုရန်ဘယ် ID ပုံစံများလိုအပ်ပါသလဲ။
PoundSlots.com သည်သင်၏ Debit သို့မဟုတ် Credit Card မိတ္တူများ (ရှေ့တွင်အလယ်နံပါတ် ၈ ခုနှင့်နောက်ကျောတွင် CV2 ကုဒ်ပါရှိသည့်)၊ အသုံးစရိတ်ငွေတောင်းခံလွှာမိတ္တူများကိုလိပ်စာအထောက်အထားနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံ ID အထောက်အထားအဖြစ်ကြည့်ရှုရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူ၏မျက်နှာ၊ လက်မှတ်နှင့်နာမည်အပြည့်အစုံကိုဖော်ပြသည့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်။
ကျွန်ုပ်၏ ID မိတ္တူများကိုဘယ်လိုပို့မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံရရှိချိန်မှ စတင်၍ အလုပ်လုပ်ရန် (၃) ရက်အထိကြာသည်။
သင်၏ PoundSlots.com အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ရန်ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ "လော့အင်" ဟုအမှတ်အသားပြုပါ။ ၎င်းသည် login ဖန်သားပြင်ဖြင့်ပြတင်းပေါက်အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လိမ့်မည်။
သင်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုသင်မေ့သွားပါကသို့မဟုတ်၎င်းမှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတော့ပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည် ဖောက်သည်များပံ့ပိုးမှု အဖွဲ့ကပြန်လည်စတင်ရှိသည်။
ဝင်ရောက်ရန်မျက်နှာပြင်မှသင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်ပြီးနောက် "မေ့လျော့သောလျှို့ဝှက်နံပါတ်" အမည်ရှိ link ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏စကားဝှက်ကိုသင်၏အကောင့်ရှိမှတ်ပုံတင်ထားသောအီးမေးလ်သို့ပြန်ပို့ရန် link တစ်ခုပို့လိမ့်မည်။
ကာစီနိုထဲသို့ဝင်ပြီးသည်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမွမ်းမံရန် "ကျွန်ုပ်အကောင့်" link ကိုသုံးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လိပ်စာ (သို့) အကောင့်ရှိမှတ်ပုံတင်ထားသောအမည်ကိုပြောင်းလဲလျှင်ထပ်မံစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။
ထုတ်ယူခြင်းကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသည့်လုပ်ငန်းကို (၃) ရက်အတွင်းဆောင်ရွက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်အီးမေးလ်အတည်ပြုချက်ကိုသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဘဏ်တစ်ခုချင်းစီတွင်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများအတွက်အချိန်ကာလအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်ရန်ပုံငွေများသည်သင်၏ငွေစာရင်းတွင် ၇ ရက်အတွင်းဖွင့်ထားသင့်သည်။
ဝါယာလက်လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ထုတ်ယူခြင်းများသည်အနည်းဆုံး£ / $ / € 50 အထိရှိနိုင်ပြီးကျန်ငွေထုတ်နည်းအားလုံးသည်အနည်းဆုံး£ / $ / € 2.5 ဖြစ်သည်။ သင်၏အကောင့်မှငွေထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုပါ ငွေထုတ်ထုတ် စာမျက်နှာ။
သင်၏အွန်လိုင်းကာစီနိုအကောင့်ထဲသို့ရန်ပုံငွေများမည်သို့သွင်းရမည်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုပါ ကာစီနိုသိုက် အပိုင်း။
Visa, Mastercard, Neteller နှင့် Skrill တို့ကိုငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါသည်။
ဤဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အခမပေးပါ။ ဂိမ်းအများစုသည်စစ်မှန်သောငွေအတွက်သင်ကစားနိုင်သည့်အခမဲ့ကစားခြင်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ကစားခြင်းရွေးချယ်မှုကိုပေးသည်။ အကယ်၍ မင်းကအခမဲ့ကစားချင်ရင်မင်းကခရက်ဒစ်ကဒ်တောင်မှမတောင်းဘူး။
သင်၏ကန့်သတ်ချက်ကိုလျှော့ချလိုပါကငွေကိုင်သို့သွားပြီး“ သွင်းခြင်း” tab အောက်ရှိ“ Set Deposit Limit” link ကို နှိပ်၍ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်ကန့်သတ်ချက်ကိုဖြည့်ပြီးအတည်ပြုရန်“ Submit” ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏အပ်ငွေပမာဏကိုတိုးမြှင့်လိုပါက Customer Support သို့ ဆက်သွယ်၍ ပိုမိုမြင့်မားသောကန့်သတ်ချက်အသစ်ကိုတောင်းခံပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်းသင်တစ်ကြိမ်သာပြုလုပ်နိုင်သည်။
သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်တွေ့နိုင်သည် တာဝန်သိဂိမ်း အပိုင်း။
PoundSlots.com သည် Microsoft Windows Operating Systems ဗားရှင်း ၂၀၀၀ နှင့်အထက်နှင့် Flash ဗားရှင်း ၉ နှင့်အထက်တို့နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ လောင်းကစားရုံဆော့ဝဲလ်သည် Windows 9X, 3.XX သို့မဟုတ် Web TV ကိုမထောက်ပံ့ပါ။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်သင်၏ Monitor ကို 1024 X 768 Pixels နှင့်အရောင် (16 bit) သို့မဟုတ်ထိုထက်များထားပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ PoundSlots.com လောင်းကစားရုံကိုမင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းမှာရနိုင်ပါတယ်။ ယခုတွင်သင်သည် iPhone နှင့် Android စမတ်ဖုန်းများတွင်ကစားနိုင်သည်။
ကျွန်တော့်ကွန်ပြူတာမှာ cookies တွေကိုသိမ်းထားပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ cookie အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်အခြားသီးသန့်တည်ရှိမှုသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပါ privacy စာမျက်နှာ.
ဆော့ဗ်ဝဲကို download လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား
download လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားရုံဂိမ်းကိုအွန်လိုင်း၊ လုံခြုံစွာနှင့်လုံခြုံစွာကစားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားရုံဂိမ်းများကိုဝင်ကြည့်ရန်အခက်တွေ့နေပါကသင်သည်မီးတံတိုင်းတစ်ခုနောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသည်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းများကစားရန်အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သည့် firewall ဆော့ဖ်ဝဲကိုမဆိုပိတ်ထားပြီးသင်၏ connection အားသေချာစေရန်အင်တာနက်ရှိအခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။ သင်ဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲများရှိပါက နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ ကူညီနိုင်လိမ့်မည်။
သင်၏အွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်းအကောင့်ကိုသင်ပိတ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ သူတို့ကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
PoundSlots.com သည်သင်၏ဘဏ္informationာရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုလုံး ၀ လုံခြုံမှုရှိစေရန်နောက်ဆုံးပေါ်စာဝှက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။ ဆိုက်လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်တွေ့နိုင်သည် သီးသန့်တည်ရှိမှု အပိုင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကိုအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည် မော်လတာကစားနည်းအာဏာပိုင်, MGA / B2C / 231/2012 လိုင်စင်နံပါတ် Malta Gaming Authority မှထုတ်ပြန်သည် 16 Aprilပြီ, 2013 တွင် and is licensed and regulated in Great Britain by the Gambling Commission under account number 39335. Gambling can be addictive.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကို Instant Chat သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် ဆက်သွယ်ရန်.
အွန်လိုင်း slot နှစ်ခုကစားခြင်းအတွက်ငါဘယ်လောက်အထိအောင်နိုင်လဲ။
အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းများအကြားဂျက်ပုတ်များသည်ကွဲပြားသော်လည်းတိုးတက်သော slot များဂိမ်းသည်£ 1m ထက်ပိုသောတိုးတက်သော jackpots များကိုပေးသည့်ဂိမ်းများစွာနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်သောအနိုင်ရရှိသည်။ တိုးတက်သော jackpot ဂိမ်းများ၏ဆွဲဆောင်မှုသည်အစုရှယ်ယာတစ်ခုခုကိုကစားခြင်းအားဖြင့် Jackpots များကိုအနိုင်ရရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်လူတိုင်း Huge Jackpot Winnner ဖြစ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
သင့်မှာ Free Slots Games ရှိလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်းအတော်များများသည်ကစားသမားများကို "အခမဲ့ကစားခြင်း" mode တွင်ကစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကံကြမ္မာကိုမကြိုးစားမီနှင့်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအတွက်ကစားခြင်းမပြုမီဂိမ်းကစားပုံကိုသင်သဘောပေါက်နားလည်စေသည်။
အခမဲ့ slot နှစ်ခုဂိမ်းများ
လောင်းကစားရုံအများစုမှာကစားရတာပျော်ဖို့ကောင်းပြီးနာရီပေါင်းများစွာဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ပျော်ရွှင်စရာလောင်းကစားရုံဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကျပန်းဂိမ်းကဏ္gamesတွင် Crown နှင့် Anchor, Beerfest နှင့် Cashapillar ကဲ့သို့သောအလွန်သေးငယ်သောဂိမ်းများနှင့်တွေ့နိုင်သည်။
Online Blackjack ကိုကစားခြင်းဖြင့်ငွေရှာနိုင်ပါသလား။
အခွင့်အလမ်းအများစုကစားသည့်နည်းတူအွန်လိုင်းဘလက်ဂျက်ဂျက်ကစားခြင်းဖြင့်ငွေရှာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ Blackjack ကိုကစားရန်အတွက်နည်းဗျူဟာများစွာရှိသော်လည်းအချို့သောအခြေခံစည်းမျဉ်းများကျင့်သုံးနိုင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်အလွန်အမင်းဆန့်ကျင်။ မဆုံးရှုံးနိုင်ပါကဂိမ်း၌ဆက်နေရန်ခွင့်ပြုထားသောအလောင်းအစားကန့်သတ်ချက်ကိုမလိုက်နာပါနှင့်။
ကဒ်ရေတွက်ခြင်းသည် Blackjack တွင်တရား ၀ င်ပါသလား။
Online Blackjack တွင်ကဒ်ရေတွက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ရိုးရာလောင်းကစားရုံအခြေခံ Blackjack ဂိမ်းများနှင့်မတူဘဲလက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကုန်းပတ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အွန်လိုင်းကစားခြင်းကိုကစားခြင်းသည်သင်၏ဒေသခံလောင်းကစားရုံတွင်ကစားခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ ကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်မတူသောကစားနည်းစည်းမျဉ်းများသည်ကွဲပြားသောကြောင့်ကစားခြင်းတွင်ကစားရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာကစားပွဲတစ်ခုချင်းစီတွင်ရှိသော“ Help” ခလုတ်ကို သုံး၍ ခွင့်ပြုထားသောအလောင်းအစားအမျိုးအစားများနှင့်မည်သို့လောင်းနိုင်သည်ကိုဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကစားတဲ့ကစားပွဲအားလုံးမှာအခမဲ့ကစားနိုင်တဲ့ကစားနည်းကိုအသုံးပြုပြီးရူဘယ်ကစားနည်းကိုအစစ်အမှန်ငွေအတွက်ကစားခြင်းမပြုမီသင်ကစားခြင်းကိုဘယ်လိုကစားရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်နိုင်ပါတယ်။
ကစားခြင်းသည်မှတ်ဉာဏ်မဲ့ကစားနိုင်သည့်ကစားနည်း ဖြစ်၍ အဘယ်ကြောင့်သင်ကစားနိုင်သည့်သင်္ချာနည်းကိုသင်အသုံးချပါစေပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အနိုင်ရလဒ်များသည်ကစားကွင်းစနစ်နှင့်မဟာဗျူဟာများကိုအမြဲတမ်းအိမ်၏အစွန်းကအုပ်ချုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးကစားပွဲ၏ကျပန်းသဘောသဘာဝကြောင့်ကစားခြင်းနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထိုနည်းဗျူဟာကိုအသုံးမပြုတော့ခြင်းကဲ့သို့သောအနိုင်ရရှိမှုနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ငါတို့ကစားတဲ့ကစားပွဲအားလုံးမှာ“ အခမဲ့ကစားခြင်း” ရွေးစရာတစ်ခုရှိပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမစွန့်ဘဲဂိမ်းများကိုအခမဲ့ဆော့ကစားနိုင်မှာပါ။ ဂိမ်းကစားပုံနှင့်အရှိန်မြှင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစစ်မှန်သောငွေအတွက်ကစားရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။